စိမ် ထားချင်တယ် – Hlataw.com
“မသစ္စာ” “ရှင်…ကိုအေး” “ကျနော်..မသစ္စာ..ကို.ချစ်တယ်” “သိပါတယ်..ကိုအေး…ဒါပေမယ့် သစ္စာအကြောင်း ကိုအေးဘယ်လောက်သိလို့လဲဟင်” “ကျနော်သိသင့်သလောက်သိပါတယ်၊ မသစ္စာက အပျိုမဟုတ်ဘူး.. တစ်ခုလပ်ဆိုတာလေ” “ဟုတ်တယ်..ကိုအေး အဲဒါတွေကအမှန်ပဲ” “နောက်ပြီး မသစ္စာယောက်ျားကို ကျနော်မြင်ဖူးပါတယ်” “အော်..ဟုတ်လား” “ဟုတ်တယ်မသစ္စာ၊ ဒီလူက.လူယုတ်မာပဲ” “ဘာဖြစ်လို့လဲ” “မသစ္စာတို့အကြောင်းတွေလူတကာကိုလည်း ပြောနေတာ၊ အဲဒါမသစ္စာသိလား” “သိပါတယ်” “ဗျာ” “ဘာလဲ ကိုအေး.. သစ္စာကိုစိတ်ပျက်သွားပြီ မဟုတ်လား” “အဲလိုမဟုတ်ပါဘူးဗျာ၊ ကျနော်မသစ္စာကို လက်ထပ်ပါရစေ” “ကိုအေး..သေချာစဉ်းစားပြီးမှ ကျမဘဝကိုဝင်ခဲ့ပါ၊ ရှင်ပြန်ရုတ်သိမ်းချင်လဲ ဖြစ်ပါတယ်”
ဒါပေမယ့် သစ္စာအကြောင်းကို သစ္စာသေချာရှင်းပြမယ်“အော်…အဲဒါဆိုလည်းပြောပြပါဗျာ၊ ကျနော်နားထောင်မယ်၊ ပြီးတော့ စိတ်ရှင်းးရှင်းနှင့် လက်ထပ်မယ်” “ဒီလိုကိုအေး” မသစ္စာအသက်ဆယ့်ရှစ်နှစ်ပြည့်ချိန်မှာ ကိုထွန်းနှင့်တွေ့ခဲ့တယ်။ ကိုထွန်းနှင့်တွေ့ချိန်မှာ လူငယ်သဘာဝရင်ခုန်ခဲ့တာပေါ့။ ကိုထွန်းက ချစ်ရေးဆိုချိန်မှာ ရင်တွေတဒိန်းဒိန်းခုန်တယ်လေ၊ ဒါကို အချစ်ပဲမှတ်ခဲ့တယ်။ “သစ္စာ” “ရှင်” “သစ္စာ..ကိုကျနော်ချစ်တယ်” “ဟင်..ကိုထွန်းကလည်း” “ကို့.ကိုအဖြေပေးပါ” “အော်..ကိုထွန်း..သစ္စာကမိန်းမသားပါ၊ အခုချက်ချင်းဘယ်အဖြေပေးနိုင်ပါ့မလဲ” “အချစ်ကအချိန်ဆွဲလို့မဖြစ်ဘူးသစ္စာ၊ လက်ဦးမှုအမြဲယူမှဖြစ်မယ်လေ။ အဲဒါကြောင့် အခုပဲအဖြေပေးပါ” “အာ..ကိုထွန်း..တစ်ယောက်အကြောင်းတစ်ယောက် သေချာလေ့လာရမယ် မဟုတ်လား” “အဲဒါက အချစ်မဟုတ်ဘူးသစ္စာ၊ အဲဒါ ဦးနှောက်နှင့်ဆုံးဖြတ်တာ၊ နှလုံးသားနှင့် ဆုံးဖြတ်တာမှ မဟုတ်ပဲ” သစ္စာလည်း အဲသလိုပြောတော့ သူပြောတာအမှန်ပဲလို့ ထင်ခဲ့မိတယ်၊ ကိုကလဲ ချစ်နေပြီဆိုတော့ “ပြီးရော.ကိုထွန်းနောက်တပတ်အဖြေပေးပါ့မယ်” “ဟေး..ပျော်တယ်သစ္စာရာ” “ရွှတ်” “အာ……ဘယ်လိုလုပ်တာလဲ ကိုထွန်းရာ အဖြေတောင် မပေးရသေးဘူး လူကိုလာနမ်းနေတယ်”
“အာ..ကိ..လွှတ်ကွာ..သစ္စာရှက်တယ်” “မလွတ်ဘူး..” ဆိုပြီးသစ္စာနှုတ်ခမ်းကိုနမ်းလိုက်တယ်။ “အာ့..အွန်းး” သစ္စာရုန်းချိန်တောင်မရတော့ဘူး၊ ရုန်းလည်း မရုန်းနိုင်တော့ဘူး၊ ကြင်နာတဲ့အနမ်းတွေမှာ ရစ်မူးသွားခဲ့ပြီလေ၊ ရင်ထဲမှာ ကုလားဘုရားပွဲလှည့်သလို ဒိန်းတပ်တပ်နှင့်ပေါ့။ ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ရဲ့ ပထမဆုံးအထိအတွေ့မှာ သစ္စာမရှောင်နိုင်တော့ဘူး၊ ကိုထွန်းရင်ခွင်ထဲမှာပဲ ပျော့ခွေခဲ့ရပြီလေ။ ဒါကိုပဲအချစ်လို့ထင်ခဲ့မိပြီလေ။ နောက်တပတ်ချိန်းတွေ့ကြရင်း ကိုထွန်းအတင်းခေါ်လို့ သစ္စာလည်း မစဉ်းစားမဆင်ခြင်နိုင်ဘဲ ကိုထွန်းနောက် ခိုးရာလိုက်ခဲ့တော့တာပေါ့။ “သစ္စာ..ကြောက်နေလား” “အင်း” “ဘာမှကြောက်မနေနဲ့၊ လင်မယားဖြနပြီ” “အာ..ရှက်တယ်၊မပြောနှဲ့” “ပြွတ်..ပြွတ်” “အာ..ကို..” “အင်း…ဟင့်..ဟင့်” “သိပ်ချစ်တယ်သစ္စာရယ်” “အင့်..ဟင့်..ဟင့်” ရင်ခုန်ကြည်နူးမှု့တွေနှင့်အတူ သစ္စာတစ်ယောက်အရှက်တွေ ကင်းကွာလို့ ရင်ခုန်သံနောက်ကောက်ကောက်ပါခဲ့တော့တယ်။ ကိုထွန်းတစ်ယောက် သစ္စာနှုတ်ခမ်းကို နမ်းလိုက်ပြီးနောက်မှာ သစ္စာအကျီင်္ကိုပါ ချွတ်လိုက်တော့တယ်။
“အာ့..အင်းးဟင်းးး” ကိုထွန်းလည်း နုထွားဖြူဖွေးတဲ့ သစ္စာနို့တစ်စုံကို တလှည့်စီစို့ရင်း သစ္စာရဲ့ကာမစိတ်ကို နိုးဆွလိုက်တယ်၊ ခွက်ဝင်နေတဲ့နို့သီးခေါသွးတွေ ချွန်ထွက်လာတဲ့အထိ နိုးဆွရင်း သစ္စာပိပိကို ထမီပေါ်ကအုပ်ကိုင်ပြီး ပွတ်ပေးလိုက်တော့ “အာ့..အင်းးဟင်းးးးးးးကိုထွန်းရယ်” သစ္စာမှာပိပိအပွတ်ခံရတဲ့အတွက် တဆတ်ဆတ်တုန်ကာ အရေကြည်ကလေးတွေ ထွက်လာလို့ ပိပိမှာစိုရွှဲလာမှန်း သိလိုင်တယ်။ ပိပိထဲလက်ဝင်လာတော့ သစ္စာလည်း ပေါင်ကိုစေ့ထားရာက ခပ်ဟဟလေးကားလိုက်တော့တာပေါ့။ ကိုထွန်းက သစ္စာပိပိမှာအရည်တွေစိုပြီး ချွဲနေတော့ လုပ်ရန်အချိန်ကျရောက်ပြီဆိုပြီး လုံချည်ကို ဆွဲချွတ်တော့ သစ္စာလည်း ခါးလေးကို အသာလေးကြွလိုက်တာပေါ့၊၊ သစစာပေါင်ကြားကို ကိုထွန်းဝင်လာတာကြောင့် သစ္စာရှက်စိတ်ကလေးဝင်ပြီး မျက်လုံးလေးမှိတ်ထားလိုက်တယ်လေ၊ ကိုထွန်း ငါ့ကိုလိုးတော့မယ်ဆိုပြီး ရင်တွေက အရမ်းခုန်မိတာလေ၊ “ပြွတ်.ပလပ်” “အို့” တကယ်တမ်းကျတော့ ကိုထွန်းဟာ သစ္စာပိပိပေါ်မျက်နှာအပ်ပြီး ပိပိကိုယက်လိုက်တယ်။ “အာ ကိုထွန်းဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲဟင်၊ ဘုန်းကံတွေနိမ့်မယ်ကွယ်” ကြားဖူးပေမယ့် လက်တွေ့မှာ အဲလိုမလုပ်လောက်ဘူးလို့ တွေးခဲ့မိတယ်။ “သစ္စာမတားနှင့်ကွာ၊လင်မယားတွေဖြစ်လာပြီပဲကွာ” “ကိုထွန်းကလည်းအဲလိုတွေလုပ်စရာလား” “လင်မယားဆိုတာအရှက်ကုန်ပဲလေ” “အားလုံးလုပ်မှာပေါ့” “အဲဒါဆိုလည်း.အဲလိုကြီးမလုပ်ပါနှင့်၊ရွံစရာကြီး” “ကိုလည်းလုပ်မယ်၊ သစ္စာလည်းပြန်လုပ်ပေး” “ဟင်..သစ္စာကဘာလုပ်ပေးရမှာလဲ” “ကိုထွန်းက သစ္စာအဖုတ်ကိုယက်သလို ကိုထွန်းလီးကိုလည်း စုပ်ပေး” “အာ..ရွံစရာကြီး” “လင်မယားပဲ..ရွံစရာလားကွာ” “အာ..မလုပ်ရဲဘူး” “ရော့.စုပ်ကြည့်လိုက်ပြီးရင် သစ္စာအဖုတ်ကိုယက်ပေးမယ်” “အွန်.ဖူးဖူး” ကိုထွန်းလီးကသစ္စာပါးစပ်ထဲဝင်လာတယ်။
အရည်တွေထွက်နေလို့ ငံပျပျအရသာကြီးပါ။ အရည်တွေထွေးထုတ်ရင်း “အာကိုထွန်းကလည်း” “ချစ်ရင်လုပ်ပေးကွာ” မလုပ်ပေးပြန်လည်းမချစ်လို့ထင်အုံးမှာမို့ ရွံသော်လည်း လုပ်ပေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ရတယ်။ “ပြွတ်.ပြွတ်” ဘယ်လိုစုပ်ရမှန်းမသိလို့ ထုတ်ထိုးသကြားလုံးစုပ်သလိုပဲ စုပ်ပေးလိုက်တယ်။ ကိုထွန်းက အရပြားကို နောက်ဆွဲလိုက်တော့ ထိပ်ဖူးနီနီကြီးက ပေါ်လာတယ်လေ၊၊ စုပ်ပြီးမှတော့ ဒါလည်းစုပ်ရတာပေါ့။ အရည်တွေက စိမ့်ထွက်လာတော့လည်း အရသာက ငံပြပြလေးလေ၊ နောက်တော့လည်း မရွံတော့ဘူး၊ စုပ်ရတာ အရသာရှိလာတယ်။ တပြွတ်ပြွတ်နှင့် စုပ်လေ အရည်တွေထွက်လေပေါ့။ ကိုထွန်းက သစ္စာခေါင်းကိုင်ပြီး ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်လုပ်တယ်။ ထွေးရတာ အဆင်မပြောတော့မြိုချမိတယ်။ “သစ္စာကောင်းလား” “အင်းးးးအင်းးး” ဗလုံးဗထွေးပြောမိတာလေ။ “ရပြီသစ္စာ၊ ကိုယ့်အလှည့်လေ” “မလုပ်ပါနှင့် ကိုထွန်းရယ်” “လုပ်မှာပဲ၊ကိုယ်လုပ်သလိုပြန်လုပ်ပေးရမယ်” “အာ..မလုပ်ပါနှင့်ဆို” “အိပ်လိုက်ကွာ” သစ္စာလည်းအိပ်ပစ်လိုက်တယ်။ ကိုထွန်းက သစ္စာပေါင်ကြားဝင်ပြီး ပေါင်ကိုတွန်းတင်ပြီး အဖုတ်ကိုပေါ်အောင်လုပ်လိုက်တယ်။ အဖုတ်ကြီးက ဖောင်းပြီးဇောင်းကြွနေတာပေါ့ဗျာ။ ဖြူဖွေးတဲ့အသားအရေကြောင့် အဖုတ်ကြီးကလည်း ဖွေးနေတယ်လေ။ “ချစ်တယ်သစ္စာရယ်၊ ချစ်စရာကောင်းလိုက်တာ” “ပလပ်..ပလပ်” “အာ့…ကျွတ်ကျွတ်..ကျွတ်” “အာ့.ကိုထွန်းဘယ်လို.လုပ်တာလဲ၊” ကိုထွန်းက ဖင်အဝကိုပါ တစ်ခါတည်းပါအောင် ယက်လိုက်တာ၊ သစ္စညမှာ ဖင်ကြောတလျောက် အီဆိမ့်သွားတယ်၊ အားလည်းနာသွားတယ်။
“ကိုထွန်း..ဖင်ကိုမယက်နှင့်လေ” ကိုထွန်းက တမင်ပင်ဖငဝကိုလျှာနှင့် ထိုးမွှေလိုက်တယ်။ သစ္စာဖင်ဝကို ချုံ့ထားလိုက်တယ်။ ကိုထွန်းက အဆက်မပြတ်ယက်လိုက်တော့ သစ္စာမှာ ကြာကြာမရှုံထားနိုင်ပဲ ပြန်ပြီးလျော့လိုက်ရတယ်၊၊ ပေါင်ကိုအပေါ်တွန်းပြီး ကားထားလို့ ဖင်ဝကစူစူကလေးပွတတလေးဖြစ်နေတာလေ။ သစ္စာမှာမနေနိုင်လို့ အော်ညည်းမိတယ်။ အယက်ခံရတဲ့အရသာက ဇိမ်ရှိလို့ သစ္စာတောင်ကြိုက်လာတယ်လေ။ “ပလပ်..ပလပ်” “အားးးးး” ကိုထွန်းကသစ္စာအဖုတ်တလျောက် လျှာနှင့်ထိုးမွှေလိုက်တာ သစ္စာမှာ အရည်တွေစိမ့်ထွက်သွားလောက်အောင် ခံစားလိုက်ရတယ်လေ၊ ကိုထွန်းက သစ္စာအဖုတ်ထဲ လျှာဝင်နိုင်သလောက်ဝင်အောင်လုပ်ပြီး အစေ့ကို ကလော်သွားတော့ သစ္စာမှာမခံစားဖူးသေးတဲ့ စိတ်ခံစားမွှုကဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ အရမ်းကို ကာမစိတ်က မြင့်တက်လာပြီးအော်ညည်းမိတယ်၊၊ ကိုထွန်းလည်း အစေ့ကို ထပ်ပြီးသကြားလုံးစုပ်သလို တပြွတ်ပြွတ်စုပ်တဲ့အတွက် ဘယ်လိုမှတောင့်မခံနိုင်ဘူး၊ ခါးလေးကော့ပြီးသာ ညည်းနေမိတော့တယ်။ စိတ်က လွင့်ထွက်မတတ်ခံစားရပြီးတော့ အဖုတ်ထဲက အရည်တွေထွက်လာမှသာ လူကငြိမ်ကျသွားတယ်။ သစ္စာမှမခံစားဖူးသော ကာမအရသာကိုခံစားမိပြီး အဖုတ်ယက်တာရော ဖင်ယက်ခံတာပါ အရမ်းကြိုက်သွားတော့တယ်။
“ကောင်းလား သစ္စာ” “အင်း” “ကြိုက်သွားပြီလား” “အာ..အဲလိုမမေးနှင့်ကွာ၊ ရှက်တယ်” ကိုထွန်းက သစ္စာတစ်ယောက်သူ့အပြုအစုကို ကြိုက်သွားပြီဆိုတာ သိသွားတယ်လေ။ သူ့အလိုလိုက်ရင် ကိုယ့်အကြိုက်လည်း ရရမယ်လေ။ ကိုထွန်း သစ္စာကိုလိုးဖို့လုပ်တယ်၊၊ ထိပ်ဖူးကြီးကို အဝမှာတေ့လိုက်တယ်။ အရည်တွေထွက်နေတဲ့ စောက်ဖုတ်ကြီးက ဖောင်းကားနေတာ လီးဒစ်လေးဝင်အောင် သွင်းလိုက်တယ်။ လီးကဗျစ်ဆိုတဲ့အသံနှင့်အတူ နှစ်လက်မလောက်ဝင်သွားတယ်။ အာ့..ဆိုပြီး သစ္စာတစ်ယောက်အော်လိုက်မိတယ်။ ကိုထွန်းက ပါကင်ဖောက်တာကြည့်ချင်တာမို့၊ သစ္စာနာမှာသိပေမယ့် အနာသက်သာအောင် နို့မစို့ပေးပါဘူး။ နို့စို့နေရင်အောက်မှဖြစ်နေတာ မမြင်ရဘူးလေ၊ ဒီတော့ အေးဆေးလေးလုပ်ရင်း မျက်လုံးဇိမ်ခံတာပေါ့။ ဝင်သလောက်လှုပ်ရှားလိုင်သေးတယ်။ ဖြေးဖြေးထိန်းပြီး လှုပ်ရှားတာလေ။ သစ္စာမအော်တော့ပဲ ငြိမ်နေမှ တချက်ကလေးရှေ့တိုးလိုးလိုက်တယ်၊ ဗျစ်..ဗျစ်..ဗျစ်အသံနှင့်အတူ လီးကလေးလက်မလောက်ဝင်သွားတယ်။ “အာ..အမလေး..ကိုထွန်းနာတယ်” ကိုထွန်းကဆက်မလိုးပဲရပ်လိုက်တယ်။ သစ္စာမှာ ပူစပ်စ်နှင့်သပ်ရိုက်ထည့်သလို ခံစားလိုက်ရတယ်၊၊ ကိုထွန်းခဏနားပြီးမှ လီးကို အပြင်ကိုထုတ်ကြည့်တယ်။ သွေးစသွေးနတွေပေပြီး လီးက အပြင်ဘက်ထွက်လာတယ်လေ။ ကိုထွန်းသဘောတော်တော်ကျလိုက်ပြီး ပြုံးလိုက်တယ် “အာ..ကိုထွန်း.ရှင်ကတော့ပြုံးနိုင်တယ်၊ ကျမမှာတော့” “အစမို့ပါသစ္စာ၊ နောက်တော့ကောင်းလာမှာပါကွယ်” ဆိုပြီးလီးကိုဖြေးဖြေးချင်းထပ်သွင်းတယ်။ လီးကလည်း တဗြိ..ဗြိနှင့်ဝင်သွားတော့တယ်။
လီးက တိုးလို့သာဝင်လာတယ်။ နာကျင်မှုတွေကို သည်းခံပြီး ကောင်းလာမယ့်အရာကိုသာ သစ္စာတစ်ယောက်မျှော်လင့်မိပါတော့တယ်။ အခုမနာလည်း နောက်နာလာမှာပဲလေ။ အခုတစ်ခါပဲ နာလိုက်ရင် နောင်ဆိုကောင်းလာမှာပဲလို့ စိတ်ဒုံးဒုံးချပြီးနေလိုက်တယ်။ လိုးတာက မှုတ်ပေးတာနှင့်မတူတာကို အခုတော သစ္စာတစ်ယောက်သိသွားတာလေ။ “ဗျစ်..ဗျစ်..ဖတ်” အာ့..လီးကအဆုံးထိဝင်သွားတာ အစမှာသာ နာနေပေမယ့် အထဲရောက်တော့လည်း သိပ်မနာတော့ဘူးလေ။ ကိုထွန်းက တရစ်ချင်းပဲ ဖြေးဖြေးလေးလိုးလိုက်တယ်။ အရမ်းဆောင့်နေရင် သစ္စာတစ်ယောက်နာနေမှာ စိုးရိမ်လို့ပေါ့။ ဒါပေမယ့် စေးကျပ်နေတဲ့အဖုတ်ကြောင့် မြန်မြန်လိုးရင် ပြီးသွားနိုင်တယ်။ အချိန်အကြာကြီးလိုးမှ သစ္စာဇိမ်ရှိမှာ၊ တစ်ခါလိုးယုံနှင့် စွဲသွားအောင် အာရုံလွှပြီးလုပ်ရင်း သစ္စာညည်းသံလေးပါ နားထောင်မိတယ်။ ခဏကြာတော့ လီးကတဗြင်းးဗြင်းမည်လာသလို သစ္စာဆီကလည်း အသံလေးတွေထွက်လာတယ်။ ဒါကြောင့် အရှိန်နှုန်းလေးတင်ပြီး မြန်မြန်ဆောင့်လိုက်တယ်။ ကိုထွန်းက မြန်မြန်လိုးလေ သစ္စာမှာအရသာတွေ့လာလေမို့ ပိုညည်းလေ။ ညည်းသံကြားလေကိုထွန်းအားရလေ။ နောက်တော့ သစ္စာမှာနာနေတာပျောက်ပြီး လိုးခံရတဲ့အရသာကို ကောင်းမှန်းသိလာတယ်။ တဖြေးဖြေးကာမစိတ်အရှိန်တက်လေ အော်ညည်းမိလေ၊ ကိုထွန်းပိုဆောင့်လေ ပိုကောင်းလေ။ လီးဝင်သံတဗျိဗျိကြားရလေ၊ သစ္စာစိတ်ခံစားမှု့က အထွဋ်အထိပ်သို့ရောက်လာပြီး ပြီးသွားရတယ်လေ။ သစ္စာအခြေအနေကိုကြည့်ပြီး ကိုထွန်းလည်း စိတ်လျှော့လိုက်တော့ သုတ်တွေလည်း ထွက်သွားပါတော့တယ်။ ခဏလောက်အမောဖြေပြီးတော့ “သစ္စာ.” “ပြောလေကိုထွန်း” “ထပ်လိုးချင်တယ်ကွာ” အလိုးခံရတာအရသာသိပြီးဖြစ်လို့ “လိုးလေကိုထွန်း” “မှုတ်ပေးဦးလေ” “ဒါတော့ တော်တော်ကြိုက်တယ်ဟုတ်လား” “အင်း” သစ္စာလည်းကိုထွန်းလီးကို စုပ်ပေးတော့ သုတ်လက်ကျန်တွေက ပါးစပ်ထဲဝင်လာတယ်။ စေးပျစ်ပျစ်နှင့် ရှတတငံပျပျအရသာနှင့်အတူ ညီစို့စို့အနံပါရတယ်။
သစ္စာလည်း ပြန်ထွေးမထုတ်ပဲ မြိုချလိုက်တယ်။ “သစ္စာကို့ဥလေးပါယက်ပေးပါလား” ကိုယ့်အလှည့်တုန်းက အဖုတ်သာမက ဖင်ကိုပါထိုးမွှေပြီး ယက်ပေးခဲ့လို့ သူ့ကိုလည်း ပြန်လုပ်ပေးလိုက်တယ်။ ဂွေးဥလေးကိုယက်လိုက်တာ ဂွေးဥလေးက ကျစ်ပြီးမာကျောလာတယ်လေ။ ကြည့်ရတာ ချစ်စရာတောင်ကောင်းသေးတယ်။ “သစ္စာကိုဖင်ပါယက်ပေးကွာ” “အာ..မလုပ်ချင်ပါဘူး” “လုပ်ပေးပါကွာ၊ ကိုယ်လည်းဇိမ်ရှိချင်လို့ပါ” “ဟင့်အင်း” “လုပ်ပေးပါချစ်ရယ်နှော်” “ဟင်းးး”ကဲလုပ်ပေးမယ်လုပ်ပေးလို့ရအောင်နေပေး” “ကိုထွန်းလည်း ပေါင်ကားပြီး ဖင်ကိုမြှောက်လိုက်တယ်။ သစ္စာလည်း ဂွေးဥအောက်ခြေလေးကိုယက်ပြီး ဖင်ဝကို မရဲတရဲလေးစယက်တယ်။ “အားကောင်းလိုက်တာသစ္စာရယ်… များများယက်ပေး” သစ္စာလည်း မထူးတော့ပြီမို့ ကိုထွန်းကျေနပ်အောင် သေသေချာချာထိုးမွှေလိုက်တယ်။ စိတ်ထဲမှာ ငါ့တုန်းကလည်း အရမ်းကောင်းခဲ့တယ်။ သူ့အလှည့်လည်း ကောင်းစေချင်တဲ့ စေတနာကပါတော့ ကြာကြာလေးယက်မွှေပေးလိုက်တယ်။ ခေါင်းမော့ပြီး လီးကိုကြည့်တော့ လီးကမိုးပေါ်မျှော်နေပြီလေ။ “တော်ပြီကိုထွန်းရာ.သစ္စာညောင်းလှပြီ” “ရပါပြီ.သစ္စာ” “ကိုထွန်းလိုးတော့မယ်” “နားရှက်စရာသိပ်ပြောတာပဲ” ပြောသာပြောရတယ်၊ အဲဒီလိုကြီးကြားရင် ရင်တွေခုန်တယ်။ “သစ္စာကုံးပေးပါလား” “အင်းကုံးပေးမယ်” သစ္စာကုံးပေးတော့ ကိုထွန်းလည်း နောက်ကနေ မတ်တပ်ရပ်ပြီးဒူးကွေးကာ နောက်ကနေ လိုးတော့တယ်။
ကိုထွန်းက သစ္စာခါးကော့အောင်ပြုပြင်ပြီးမှ တချက်ချင်းလိုးပြီးနောက် သစ္စာဖင်တုံးကြီးနှစ်လုံးအား ဆုပ်ကိုင်ပြီး အားရပါးရလိုးတော့တယ်။ သစ္စာလည်း လီးဝင်ချက်တွေက ပိုမြန်လေအရသာရှိလေမို့ တအာ့အာ့ညည်းရင်း ခါးကိုကော့ပေးနေလိုက်တယ်။ ကိုထွန်းလည်း ဖင်တုံးနှစ်တုံးကိုကိုင်ပြီး အားပါးတရလုပ်နေရာက ဖင်တူံးနှစ်တုံးကိုဖြဲ.ပြီး လိုးတဲ့အခါမှာတော့ အထဲကအနီရောင်ပြေးနေသော စအိုကြီးကိုမြင်ရတာကြောင့် စိတ်ပိုကြွလာတယ်။ လိုးချက်ကလည်း မြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖြစ်လာတယ်၊ အသံတွေကလည်း တဗွတ်..ဘွတ်တဖွတ်ဖွတ်နှင့် ညံနေတယ်လေ။ သစ္စာလည်း အော်ညည်းလိုက်တယ်။ ကိုထွန်းက သစ္စာဖီးတွေကြွနေမှန်းသိတယ်၊၊ တအာ့အာ့နှင့်အော်ညည်းနေတာလေ၊ နောက်တော့ ကိုထွန်းက ဖင်ထဲတံတွေးထွေးထည့်လိုက်တယ်။ “ထွီ”သစ္စာမှာဖင်ထဲ စိုစိုစိစိဖြစ်သွားကာ “အာ့….ကိုထွန်း” ကိုထွန်းက ဘာမှမပြောပဲလိုးရင်းနှင့် ဖင်သားကို ဖြဲရသ်းလက်မနှင့်စအိုဝကို ပွတ်ပေးလိုက်တယ်။ လိုးရင်းနှင့်ဖင်ပွတ်ခံရလေ ပိုပြီးအရသာတွေ့လေနှင့် ကာမရေစီးမှာ မျောပါနေရတော့တယ်။ ကိုထွန်းက ဖင်ဝကိုတံတွေးထပ်ထွေးပြီး လက်မတဖက်ကို တဖြည်းဖြည်းထိုးထည့်တယ်။ “အာ့.ကိုထွန်း သစ္စာနာတယ်” “အင်းးးကိုထွန်းလည်းပြီးတော့မယ်” ဆယ့်ငါးမိနစ်လောက် အားရပါးရလိုးပြီးသောအခါ ကိုထွန်လည်း သုတ်တွေပန်းထွက်သွားတော့တယ်။ ကိုထွန်းလည်း သစ္စာအနားကပ်လှဲလိုက်ကာ သစ္စာအားဖက်ပြီးအမောဖြေလိုက်တယ်။ သစ္စာနှင့်ကိုထွန်းဟာ မင်္ဂလာမဆောင်မှီ ဆယ့်ငါးရက်လောက်မှာ ပုံစံမျိုးစုံနှင့်လိုးဖြစ်ကြပြီး. မင်္ဂလာဆောင်ကြတယ်။ မင်္ဂလာဆောင်ပြီး နှစ်နှစ်လောက်မှ ခလေးယူမယ်ဆုံးဖြတ်ပြီး ဆေးသောက်ရင်းပဲ တားထားကြတာပေါ့။
မင်္ဂလာဆောင်ပြီးနှစ်ရက်လောက်မှာ သစ္စာမှာရာသီလာနေတယ်။ အဲဒါကြောင့် မလုပ်ချင်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ကိုထွန်းကတော့မရဘူး။ လိုးချင်နေတာပေါ့။ “သစ္စာ..ကိုလိုးချင်တယ်ကွာ” “ကိုထွန်းကလည်း ဒီမှာအဝှာဖြစ်နေတာကို” “ဖြစ်..ဖြစ်ကွာ” “မလုပ်ပါနှင့်ကိုရယ်၊သစ္စာစုပ်ပေးမယ်နှော်’” “အင်း….” သစ္စာလည်း ယောက်ျားအာသာပြေအောင် စုပ်ပေးလိုက်တယ်။ စေတနာပိုပြီး ဖင်ကအစယက်ပေးလိုက်ပေမယ့် လိုးရမှ ပြီးတဲ့လီးကတောင်မြဲတောင်လျက်ရှိတယ်။ “သစ္စာမရဘူးကွာ၊သစ္စာအိပ်လိုက်” “ဘာလုပ်မလို့လဲကို” “သစ္စာပါးစပ်ထဲထည့်မယ်လေ” “အင်းး” သစ္စာလဲအိပ်လိုက်တယ်။ ကိုထွန်းကသစ္စာအပေါ်ခွပြီး ပါးစပ်ထဲလီးသွင်းပြီး တဖြေးဖြေးလိုးတယ်။ တချက်တချက်လီးက အာခေါင်ကိုထိတာကြောင့် သစ္စာက တွန်းထားရတယ်။ အာညောင်လောက်အောင် ပါးစပ်ကို ကျယ်ကျယ်ဟပေးထားတယ်။ ကိုထွန်းလည်း အာခေါင်မထိအောင် လိုးရင်းက သုတ်တွေပန်းထုတ်လိုက်တယ်။ သစ္စာထွေးမထုတ်နိုင်အောင် လီးကိုပါးစပ်ထဲက မထုတ်ပဲစိမ်ထားတာကြောင့် သစ္စာမှာ မျိုချလိုက်ရတော့တယ်။ သစ္စာသုတ်တွေ မြိုချမှန်းသိတော့မှ အပေါ်ကဖယ်ပေးလိုက်တယ်။ “သွား..အရမ်းညစ်ပတ်တာပဲ” “ညစ်ပတ်တာမဟုတ်ဘူး၊ အားရှိတဲ့ဟာတွေပါကွာ” “အမ်..” “အဲဒါအားရှိတာမက အသားအရေပါလှတယ်” “ဟုတ်လို့လား” “အော်..ဟုတ်ပါတယ်ဆို… အရသာဘယ်လိုရှိလဲ” “ငံပျပျ.ချွဲပစ်ပစ်နှင်မြိုချရင်ရှတတနေပြီး လည်ချောင်းမှာ ကပ်နေတာလေ၊ အခုရေခပ်ပေးအုံး” ကိုထွန်းလည်းရေခပ်ပြီးပေးလိုက်ရတယ်။
သစ္စာလည်း ပလုတ်ကျင်းပြီး ရေသောက်ကာ လည်ချောင်းရှင်းလိုက်ရတယ်။ သစ္စာနှင့်ကိုထွန်းတို့ဟာ တစ်လကျော်လောက်အထိ ပျော်ပျော်ရွှင်နေရပါတယ်။ အိမ်ကလည်း ကျွေးမွေးထားနိုင်တဲ့အခြေအနေမို့လို့ ပြသနာတစ်စုံတရာမှမရှိပါဘူး။ သစ္စာမှာ ကိုထွန်းနှင့်ကာမဆက်ဆံတဲ့အခါမှာတော့.. ကိုထွန်းအလိုကျဖြစ်အောင် နေပေးပါတယ်။ ပုံစံအမျိုးမျိုးလိုးကြယုံမက သုတ်ရည်လည်း သောက်ရပါတယ်။ နောက်ရက်များမှာတော့ ကိုထွန်းက အထူးအဆန်းတောင်းဆိုတယ်။ “သစ္စာ.ချစ်လေး” “ခေါ်ပုံကတော့ထူးခြားတယ်၊ ဘာလိုချင်လိုလဲကို” “ကို.ဖင်လိုးချင်တယ်” “ဖြစ်ပါ့မလားကိုရယ်” “မဖြစ်စရာမရှိပါဘူးကွာ” “သစ္စာနာမှာကြောက်တယ်ကို” “သစ္စာနာအောင်လုပ်ပါ့မလားကွာ” “မနာရင်တော့လုပ်ပေါ့” “အင်းလုပ်ရအောင်” လိုးနေကျပုံစံအတိုင်း တစ်ဦးကိုတစ်ဦး အပြန်အလှန်မှုတ်ပေးကြပြီး ကိုထွန်းကတော့ သစ္စာကိုကုန်းခိုင်းပြီး ဖင်ကိုများများယက်လိုက်တယ်။ ဖင်ထဲကိုလျှာနှင့်ထိုးမွှေလိုက်ပြီး သစ္စာတစ်ယောက် စိတ်ကြွလာစေဖို့လုပ်လိုက်တယ်။ သစ္စာမှာ ဖင်လိုးခံရမှာဆိုတော့ စိုးရိမ်မှု့နှင့် ရင်ခုန်မှုတွေက စိုးမိုးလို့ထားနေတယ်လေ။ “သစ္စာကိုလိုးတော့မယ်နှော်” “လိုးလေကို” သစ္စာမှာ အခုလိုမျိုးပက်ပက်စက်စက်တွေ ပြောတတ်လာပြီလေ၊ အပျိုတုန်းက ရှက်ခဲ့သမျှ အိမ်ထောင်ကျတော့ အရှက်ကုန်လောက်အောင်ဖြစ်ခဲ့ပြီ။ ကိုထွန်းလည်း သစ္စာဖင်ကိုလိုးဖို့အတွက် တံတွေးလေးထွေးလိုက်ကာ လက်နှင့်စိုရွဲနေအောင် လုပ်လိုက်တယ်။ “ထွီ” တံထွေးထွေးခံလိုက်ရတာနှင့် သစ္စာရင်ထဲမှာ အေးစက်စက်ကြီးနှင့် ကြောက်သလို ခံစားလိုက်ရတယ်။ ကိုထွန်းကတော့ လီးကို ဖင်ထဲတိုက်ရိုက်မလိုးသေးဘဲ အဖုတ်ထဲထည့်ကာလိုးရင်း လက်ဖြင့် တင်သားနှစ်ခြမ်းကိုဖြဲကာ လက်မထည့်ရင်း အဖုတ်ဆီမှ ချောဆီတွေထွက်လာအောင် လုပ်လိုက်တယ်လေ။ စိုးရိမ်နေတဲ့သစ္စာမှာ.. ဖင်ထဲလီးဝင်လာမဟုတ်ပဲ အဖုတ်ထဲသာ လီးဝင်လာတဲ့အတွက် အံ့ဩသွားသေးတယ်။ ကိုထွန်းနှုးဆွထားလို့ကြွနေတဲ့ ကာမစိတ်က ဟုန်းကနဲ ထတောက်လာပြီး ညည်းညူလိုက်တော့တယ်။
ကိုထွန်းက လီးကိုအရှိန်နှင့်လိုးပြီး ပိပိထဲက အရည်တွေထွက်အောင် လုပ်လိုက်တယ်။ ဗျစ်ဗျစ်နှင့်ဝင်နေရာကနေ ဘွတ်..ဗွတ်.. ဆိုတဲ့အသံတွေ ထွက်လာမှ လီးကိုဆွဲထုတ်ရင်း သစ္စာဖင်ထဲကိုထပ်ထွေးလိုက်ပြီးလီးကိုသွင်းတယ်။ “ဗျစ်…ဗျစ်” “အားးးးနာတယ်..ကို.. အားးးးးး” ကိုထွန်းကရလောက်ကြီဆိုပြီး အဆုံးထိသွင်းလိုက်တယ်။ စအိုဝအထဲထိ ကျွံဝင်သလိုမြင်လိုက်ရတယ်။ “ဗျစ်..ဗြိ…ဗျိ” “အားးးးးးးဟားးးးးးးသေပါပြီ. ကိုထွန်းးးအား ပြနထုတ်ပေးပါ” သစ္စာအလန့်တကြားအော်သံကြောင့် ကိုထွန်းလည်း လန်ဖြတ်ပြီးထုတ်လိုက်တယ်။ စအိုဝမှာ သွေးစတွေတွေ့လိုက်ရလို့ လန့်ဖြတ်သွားတယ်။ “အားးကိုထွန်းသစ္စာသေပြီ.အီးးးဟီးးးးးဟီးး” “ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး” “ဘာလို့ဘာမှမဖြစ်ရတာလဲ သွေးတွေအဲလောက်ထွက်တာ” “ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး” “ဒီမှာအောင့်လဲအောင့်နာလည်းနာနှင့်အီး.. ဟီးးဟီးးး” “မငိုပါနှင့်သစ္စာရယ်၊ ဆေးခန်းပြရအောင်” “ဒီဟာကိုဘယ်လိုမျက်နှာနှင့် ဆေးခန်းပြရမှာလဲ. အီးးးဟီးးးဟီး” “ကိုဆေးထည့်ပေးမယ်နှော်သစ္စာ” “အီး..ဟီးးးစပ်မှာပေါ့” “မစပ်ပါဘူးကွာ.ကိုယ်ဆေးသွားဝယ်လိုက်မယ်” ကိုထွန်းဆေးဆိုင်ကိုအမြန်သွားပြီး ဂွမ်းထုတ်နှင့် ဘီတာဒိုင်းညှစ်ဆေးဝယ်လာလိုက်တယ်။ သစ္စာမှာ ကိုထွန်းဆေးဝယ်သွားချိန်. အိမ်သာတက်ချင်လို့ အိမ်သာထိုင်တယ်။
ဝမ်းသွားရာမှာလည်း သွေးစတွေပါလာလို့ အရမ်းကြောက်သွားမိတယ်။ ရေဆေးတော့လည်း စပ်ဖျဉ်းဖျဉ်းဒဏ်ကို တော်တော်လည်းခံစားရလိုက်တယ်လေ။ အဲဒီကစလို့ သစ္စာမှာ ဖင်လိုးခံရမှာ အရမ်းပဲကြောက်သွားတော့တယ်။ ကိုထွန်းလည်း ပြန်ရောက်လာပြီး ဆေးလိမ်းပေးရတယ်။ သုံးလေးရက်နေမှ အနာပျောက်သွားပြီး ကိုထွန်းလည်း နောက်ဖင်လိုးဖို့ မတောင်းတော့ပါဘူး၊ လုပ်နေကျပုံစံအတိုင်းပဲ လုပ်နေရတော့တယ်။ ကိုအေးမှာ မသစ္စာပြောတဲ့စကားတွေကိုကြားပြီး လီးကတင်းမာလွန်းလို့ အောင့်နေတယ်။ လီးကလည်း အရည်တွေတောင် စိမ့်ထွက်နေတယ်။ စာအုပ်ဖတ်ရတာမျိုး ခံစားချက်မဟုတ်ပဲ ကိုချစ်ရသူရဲ့အဖြစ်အပျက်ကို လူကိုယ်တိုင် နားထောင်ရလို့ပါပဲ။ ကိုထွန်းသားပုတ်လေလွင့်ပြောထားသမျှကို မသစ္စာက အမှန်အတိုင်းရှင်းပြတဲ့အတွက် မသစ္စာအပေါ်မှာ လေးစားမှုတွေ ထပ်မံတိုးပွားလာခဲ့တယ်။“မသစ္စာ အဲလောက်တောင်ချစ်ခဲ့ကြပြီးမှ ဘာလို့ကွာရှင်းခဲ့တာလဲ” “ကိုအေး.. သစ္စာလော်မာလို့တော့ မထင်ပါနှင့် ကျမနှင့်သူနှင့်ယူခဲ့တုန်းက ကျမသူ့အလိုကျနေခဲ့တယ်၊ နောက်ပိုင်းအလုပ်လုပ်တော့ အရက်ကလေးသောက်တာကစပြီး ကိုယ်ထိလက်ရောက် ရိုက်လားပုတ်လား လုပ်လာပါတယ်၊၊ သူ့အမတွေရဲ့ သွေးထိုးမှုတွေကြောင့်လဲ ပါတယ်လေ။
အကျဉ်းချုံပြောရရင် မယူခင်ကတည်းက တစ်ယောက်အကြောင်းတစ်ယောက် လေ့လာခဲ့ရမှာ၊ ငယ်ရွယ်တဲ့အရွယ်ဖြစ်လို့ ရင်ခုန်တာ အချစ်လို့ထင်ခဲ့တာလေ၊ အချစ်ကိုကိုးကွယ်မိလို့ ဖြစ်ရတဲ့ပြသနာတွေပါ။ ကျမမှားခဲ့တာပေါ့၊ ကဲကိုအေးစဉ်းစားပါ ကျမအကြောင်း ပြည့်ပြည့်စုံစုံသိသွားပြီပဲ” “မသစ္စာ ကျနော့်အချစ်က မယိုင်လဲပါဘူး၊ ဖူးစာရေးနတ်ကြောင့် နောက်ကျမှ သိရတယ်၊ နောက်ကျမှ ချစ်ခွင့်ရတယ်လို့ သဘောထားပါတယ်” “ဝမ်းသာပါတယ်ကိုအေး၊ ကျမကို အချစ်မပြယ်တဲ့အတွက်ပါ” “ကျနော့်အချစ်ကိုလက်ခံတယ်မဟုတ်လား မသစ္စာ” “ကျမအရှက်ကုန်ပြောပြီးပဲလေ၊ အဲဒါ ကိုအေးကိုလက်ခံလို့ပေါ့” “ဝမ်းသာလိုက်တာ မသစ္စာရယ်” “ကျမနှင့်လက်ထပ်မယ်ဆို လူကြီးစုံရာနှင့် လာတောင်းပါ ကိုအေး၊ သစ္စာပြောချင်တာက သစ္စာက တခုလပ်လေ၊ လူပြောခံရမှာကြောက်လို့ပါ၊ ခဲမှန်ဖူးတဲ့စာသူငယ်လို ဖြစ်နေလို့ပါရှင်” “ဟုတ်ကျေးဇူးပါဗျာ၊ ကျနော်လူကြီးစုံရာနှင့် လာတောင်းပါ့မယ်” ကိုအေးဟာ တကယ်တမ်း မသစ္စာတောင်းရမ်းလက်ထပ်မယ်ဆိုတဲ့အခါ ပြသနာများစွာတွေ့ရတယ်။
မိဘတွေကလည်း မကြည်ဖြူပါဘူး၊ ညီအကိုမောင်နှမတွေကလည်း တားမြစ်ကြတယ်။ “ကိုအေး” “မင်း..မသစ္စာကိုမယူပါနဲ့ကွာ” “ဘာဖြစ်လို့လည်းအဖေ” “မသစ္စာက တစ်ခုလပ်တလင်ကွာလေ” “ဖေဖေ.ရာ အခုသူ့မှာအိမ်ထောင်ရှိတာမှ မဟုတ်ပဲလေ၊ တရားဝင်ကွာရှင်းထားတာပါ ဖေဖေ” “ငါသိတယ်ကွ” “မင်း.ကလူပျို၊ ဟိုကတစ်ခုလပ်ကွ” “အဲဒါတွေလိုလို့လားဖေဖေ” “လိုတာပေါ့ကွာ၊ မင်းရောငါတို့ပါ လူတွေဆီအပြောခံရမှာ” “အာ..အဖေ…ကျနော်ယူမှာလေ၊ အဖေတို့နှင့်ယူမှာမှ မဟုတ်တာ” “ဘာကွ…. ငါကအပျိုမဟုတ်လို့တားနေတာလေ” “အဲဒါတွေကအရေးကြီးလို့လား ဖေဖေ” “အေးအရေးကြီတယ်ကွ.” “ဒီမှာဖေဖေ.ကျနော်သစ္စာကိုချစ်တာ၊ အပျိုအအိုဆိုတဲ့အရာတွေ မလိုပါဘူးဖေဖေ” “တောက်ကွာ..မင်းဟာကလည်း သစ္စာမှသစ္စာပဲ ဖြစ်နေတာလား” “အဖေ..တောင်းရမ်းပေးပါ” “အေးပေါ့ကွာ.ငါပြောမယ်၊ မင်းသေချာစဉ်းစားပေါ့ သူကတစ်ခုလပ်၊ သူ့အကြောင်းမင်းသိတယ်၊ သိရဲ့နှင့်မင်းယူတယ်၊ နောက်မှပြသနာပေါ်ရင် မင်းဘာလုပ်မလဲ၊ ကွာမှာလား၊ အေးမင်းကပါ အဲလိုလုပ်ရင် မသစ္စာဘဝဟာ ပျက်စီးရမယ်၊ မင်းလည်း အိမ်ထောင်ပျက်မယ်နားလည်လား” “ဟုတ်နားလည်ပါတယ် ဖေဖေ” “အေးမင်းဘာသာတာဝန်ယူနိုင်ရင် ငါတောင်းရမ်းပေးမယ်” “ကျနော်တာဝန်ယူတယ်” ကိုအေးပျော်သွားပြီးမသစ္စာဆီသို့သွားကာ “မသစ္စာအဖေကလာရောက်တောင်းရမ်းပေးမယ်တဲ့” “တကယ်လားကိုအေး” “အင်းပေါ့မသစ္စာရယ်” “ကိုအေးတော်တော်ပြောလိုက်ရတယ်ထင်တယ်” “အင်းပြောလိုက်ရတယ် မသစ္စာ” “ကျမနားလည်ပါတယ်..ကိုအေးရယ်၊ ကျမက အပျိုစင်မှမဟုတ်တာ ဘယ်မိဘမောင်နှမတွေကမှ သဘောတူမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ” “ဟုတ်တယ် မသစ္စာ၊ ကျနော်က ကျနော့်အိမ်ထောင်မြဲဖို့ ကျနော်တာဝန်ယူပါတယ်လို့ အာမခံမှ လက်ခံခဲ့ကြတာ” “အော်..ကိုအေးရယ်၊ သစ္စာကိုအဲလောက်တောင် ချစ်လား” “ချစ်တယ် မသစ္စာဘဝတစ်ခုလုံးနှင့်ယှဉ်ပြီးချစ်တာ” “ကျေးဇူးလည်းတင်တယ် အရမ်းလည်းဝမ်းသာတယ်” “မသစ္စာကျနော်ကိုချစ်တယ်မလား” “ချစ်ပါသတဲ့ရှင်.ချစ်ပါသတဲ့” ဒီလိုနှင့်မသစ္စာကိုတောင်းရမ်းပြီး လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး မင်္ဂလာဆွမ်းကျွေးလေးလုပ်လိုက်တယ်။
“မသစ္စာ..” “ရှင်…” “ကျနော်ချစ်ချင်ပြီ” “အို..ကိုအေးကလည်း… လင်မယားဖြစ်နေပြီပဲ ခွင့်တောင်းဖို့လိုသေးလားရှင်” “ကျနော်ရင်ခုန်လွန်းလို့ပါ” “ဟင်းးးးးဟင်းးးး” “ဘာရယ်တာလဲ မသစ္စာ” “ကျမလည်း ကိုအေးလိုပါပဲလေ” “ချစ်တယ်သစ္စာရယ်” ကိုအေးသစ္စာကိုကြင်နာစွာဖက်လိုက်ပြီး သစ္စာရဲ့နှစ်ခမ်းနှစ်လွှာကို ငုံနမ်းလိုက်တော့တယ်။ “ပြတ်.” “အင်းးဟင်းးးး” သစ္စာမှာယောက်ျားရဖူးပြီး ကာမအရသာလည်း ခံစားဖူးတယ်။ သိုသော် မလုပ်ရတာလည်း ကြာပြီဆိုတော့ ကာမစိတ်တွေက အလိုလိုဖြစ်လာတယ်။ ချစ်ရတဲ့ကိုအေးကလည်း သူ့အပေါ်တကယ်ချစ်တော့ သူ့မှာခံစားမှု့ကလည်း ပြင်းထန်နေတော့တယ်။ ကိုအေးလည်း လူပျိုသိုးပီပီ ရမက်စိတ်က ဆူဝေလာပြီး သစ္စာအကျီင်္ပါချွတ်တော့ သစ္စာလည်း အလိုက်တသိချွတ်ပေးလိုက်တော့။ ကိုအေးမှာ သစ္စာဘရာကိုပါတွန်းတင်ရင်း သစ္စာနို့တွေကိုပါ စို့လိုက်တယ်။ သစ္စာနို့မှာ အပျိုတုန်းကလိုမဟုတ်တော့တဲ့အတွက် ချိုင့်ဝင်ခြင်းမရှိတော့ပဲ အပြင်သို့ချွန်ထွက်နေလေပြီ။ ကိုအေးလည်းသစ္စာနို့ကို မက်မောစွာပင်စို့ပြီး လျှာဖျားနှင့်ထိုးကလော်လိုက်တယ်။ နို့အုံကြီးတစ်ခုလုံးကိုငုံပြီး စုပ်ယူလိုက်ရာ သစ္စာစိတ်မှာ ခံချင်စိတ်တွေ တမြှင်းမြှင်းတောက်လောင်လာကာ အလိုးခံချင်စိတ်က ပြင်းပြလာလေသည်။
ကိုအေးက နို့စို့တာရပ်ပြီး သစ္စာအဖုတ်ကိုဆင်းပြီး လျက်ရန်ပြင်ရာ။ သစ္စာမှာအားတုံ့အားနာဖြစ်ပြီး “မလုပ်ပါနှင့်လား ကိုအေးရယ်၊သစ္စာအားနာလို့ပါ” “ဘာအားနာစရာရှိလို့လဲ သစ္စာရယ်၊ အရင်ကလည်း လုပ်ခံဖူးတ်မဟုတ်လား” “အဲဒါကြောင့်ပါ ကိုအေး၊ ဟိုလူလုပ်သွားတာလေ၊ အဲဒါကိုအေးကယက်ရင်..အားနာလို့ပါ” “သစ္စာကလည်း.. သူကအခုလုပ်သွားတာမှ မဟုတ်ပဲ၊ သူ့ဟာတွေကျန်နေမှမဟုတ်တာလေ” “သစ္စာပဲလုပ်ပေးပါ့မယ် နှော်ကိုအေး၊ ကိုအေးစိတ်တိုင်းကျသာပြောပါ၊ သစ္စာလုပ်ပေးမယ်” “ဟားးးးးဟားးးမသစ္စာရယ်၊ အဲဒါတွေကိုတွေးပြီးသားပါဗျာ၊ အဲဒါတွေကို လက်ခံနိုင်လို့ သစ္စာကိုလက်ထပ်ခဲ့တာပါ” “အော်..ချစ်လိုက်တာကိုရယ်” သစ္စာမှစိတ်ထင့်နေတာတွေပျောက်သွားပြီး နားလည်မှုအပြည့်ပေးနိုင်သော ကိုအေးကို အရမ်းလည်း ကျေးဇူးတင်ကာ ပိုချစ်သွားတယ်။ “ကို..လုပ်လိုက်တော့မယ်သစ္စာ” “ဟင့်.အင်းသစ္စာအရင်လုပ်ပေးမယ်၊ အိပ်ပါကို၊ ကိုကြိုက်တာပြော သစ္စာအကုန်လုပ်ပေးပါ့မယ်” သစ္စာ.ကိုအေးကိုအင်္ကျီကြယ်သီးတွေကို ဖြုတ်ပေးလိုက်ပြီး ပုဆိုးကိုချွတ်ပေးလိုက်တယ်။ ပြီးတော့မှ ကိုအေးအပေါ်မှောက်လိုက်ပြီးး ကိုအေးကို နမ်းလိုက်ကာ နားရွက်ကလေးတွေပါ လျှာနှင့်ယက်ပေးလိုက်တယ်၊၊ ကိုအေးမှာ မသစ္စာရဲ့အပြုအစုကို သဘောကျသွားပြီး စိတ်ကထန်လာတယ်။ မသစ္စာက နားရွက်ကလေးကို လျှာဖျားနှင့် ထိုးမွှေလိုက်ပြီးနောက်မှာ လည်ပင်းကို စုပ်ဆွဲလိုက်သေးတယ်။ ကိုအေးရဲ့လီးကြီးက ဖုဖောင်းလာပြီး အလွန်တင်းမာလာတယ်။ လူပျိုဖြစ်တဲ့အတွက် အခုလိုမျိုးကိုလည်း မခံစားခဲ့ရတဲ့အတွက် စိတ်ကထိန်းမရလောက်အောင် ဖြစ်လာတယ်။ မသစ္စာလည်း ကိုအေးရင်ဘတ်ပေါ်မှောက်ပြီး ကိုအေးနို့သီးခေါင်းလေးကို စုပ်လိုက်ယက်လိုက် လုပ်ပေးရာ ကိုအေးစိတ်ထဲ အလွန်ပင်တင်းလာလေသဖြင့် ပြီးချင်သလိုပင်ဖြစ်လာသည်။ သစ္စာလည်း တဖြေးဖြေးအောက်ကိုဆင်းလာပြီး၊ ဗိုက်သားပြင်ကို လျှာလေးနှင့်ယက်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာ မာတင်းနေတဲ့ ကိုအေးလီးကို ယုယစွာကိုင်လိုက်ပြီး အာခေါင်ထဲသွင်းပြီး အာငွေ့လေးပေးလိုက်တယ်။ ပြီးတော့မှ အပေါ်မှမိုးပြီးလီးကို ပါးစပ်ထဲသွင်းလိုက်ပြီး ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ် လုပ်လိုက်တယ်။ ပါစပ်ထဲ ဝင်လို့ရသလောက်သွင်းပြီး စုပ်ပေးလိုက်တယ်။
ကိုအေးမှာ အရမ်းကို ဖီးတွေတက်လာပြီးပြီးချင်လာတယ်။ “သစ္စာကိုပြီးသွားလိမ့်မယ်” “ပြီးသွားပါစေကို.သစ္စာပါးစပ်ထဲပြီးလိုက်ပါ” “အား.နာပါတယ် သစ္စာရယ် ပြီးသွားလို့ မလုပ်ရပဲနေမယ်လေ” “သစ္စာတာဝန်ထားပါကို၊ သစ္စာလုပ်တတ်ပါတယ်” သစ္စာပြောပြီးထပ်ပြီးမြန်မြန်လေး စုပ်လိုက်ထုတ်လိုက်လုပ်လိုက်တဲ့အခါ ကိုအေးရဲ့လီးက တဆတ်ဆတ်တုန်လာပြီး သုတ်တွေပန်းထွက်သွားတယ်။ သုတ်အချို့က သစ္စာပါးစပ်ထဲကို ဝင်သွားလို့သစ္စာက မြိုချလိုက်ပြီး လီးမှာပေနေတဲ့သုတ်တွေကို လျှာလေးနှင့် ယက်ပေးလိုက်တော့တယ်။ “ကိုအေးကောင်းလားဟင်” “ကောင်းလိုက်တာသစ္စာရယ်၊ အရမ်းကောင်းတာပဲကွာ” “ခစ်..ခစ်..ခစ်” “ကို့ကိုလုပ်ပေးတဲ့အတွက် ကိုကလည်းပ်ြလုပ်ပေးပါ့မယ် သစ္စာက မပြီးသေးဘူးမဟုတ်လား” “အင်းးလေ ကို့လီးက မတောင်သေးဘူးမလား” “ခဏနေပြန်တောင်လာမှာပါ” “သစ္စာလုပ်ပေးမှာပေါ့” ကိုအေးဟာ.. မိမိအပေါ်အကောင်းဆုံးပြုစုပေးသော သစ္စာအား ပြန်လညိးပြုစုလိုက်တယ်။ “ပလပ်..ပလပ်” “အင်းးးးဟင်းးးးးကိုအေးးးကောင်းတယ်ကွာ” ကိုအေး..မသစ္စာအဖုတ်ကိုယက်လိုက်တာပါ၊ ယက်ရင်းနှင့် အဖုတ်ထဲလက်နှင့်ထိုးမွှေးရင်း သစ္စာကာမစိတ်ကိုနှိုးဆွဖို့ ကြိုးစားလိုက်တယ်လေ။ ကာမအရှိန်တက်နေတဲ့ သစ္စာလည်း.. တဖြေးဖြေး. စိတ်ခံစားမှုကို ရလာတော့တယ်။ အစေ့ကလေးကိုစုပ်ရင်း ပိပိထဲလက်နှင့်ထိုးမွှေတော့ သစ္စာဆီက အရညိအချို့ထွက်လာတော့တယ်။ “အာ့.အင့်..ဟင်းးးးး” သစ္စာလည်း ညည်းညူမိလာတယ်။ အဖုတ်ယက်ရင်းနှင့် သစ္စာပြောခဲ့တဲ့စကားတွေ သတိရတော့ သစ္စာရဲဖင်ပေါက်ဝပါကိုပါ ယက်ပေးလိုက်တယ်။
“အားး.ကိုအေးး” “ပလပ်..ပလပ်…..” သစ္စာဖင်ကိုစူထွက်လာအောင်လုပ်ရင်း ယက်ရုံသာမက စအိုဝကိုပါ စုပ်ယူလိုက်တယ်။ သစ္စာလည်း အရမ်းကိုအလိုးခံချင်လာတယ်။ ကိုအေးလီးကလည်း တောင်စပြုနေပြီလေ။ အဲဒါကြောင့် သစ္စာက ကိုအေးကို ပက်လက်အိပ်စေပြီး ပေါင်နှစ်ချောင်းကိုကွေးတင်ပြီး ဖင်ဝကိုကိုအေးလုပ်သလို ယက်လိုက်စုပ်လိုက် လုပ်လိုက်တယ်။ ကိုအေးလီးက မိုးပေါထောင်နေတော့တယ်။ မိုးပေါ်ထောင်နေတဲ့လီးကို သုံးလေးချက်မျှစုပ်ပြီး အပေါ်ကနေခွကာ လိုးသည့်အလုပ်ကို ဦးဆောင်လိုက်တယ်။ အဖုတ်ထဲကိုလီးကိုကိုင်ကာ အဖုတ်နဲ့တေ့လိုက်ပြီးဖိထိုင်လိုက်တယ်။ “ဗျစ်….ဗျစ်..ဗျစ်..” အသံနှင့်အတူ လီးကအဆုံးနီးပါးဝင်လာတယ်၊ သစ္စာလည်း ပြန်ကြွပြီးထပ်လုပ်လိုက်တယ်။ ငါးမိနစ်လောက်လုပ်ပြီးမှ ကိုအေးအပေါ်ကဆင်းလိုက်ပြီး တချက်နှစ်ချက်ခန့်စုပ်ပေးလိုက်ပြီး၊ “ကိုအေး.သစ္စာဘယ်လိုနေပေးရမလဲ” “ကုန်းပေးပါလား” “အင်းးးးကုန်းပေးမယ်” ကိုအေး..မသစ္စာနောက်ကနေ ဒူးထောက်ဝင်ပြီး လိုးလိုက်တယ်၊ အပျိုမဟုတ်တဲ့အတွက် ညှာတာစရာလည်း မလိုဘူးလေ၊ အားရပါးရသာ ဆောင့်လိုးပစ်လိုက်တယ်။ လီးကလည်း ဒုတိယအကြိမ်မို့လားမသိဘူး တော်တော်နင့်မကျဘူး။ ဆယ်မိနစ်လောက်လိုးလိုက်တယ်။“ဘွတ်..ဗျိ…ဗြစ်……ဘွတ်…ဘွတ်” “အာ့……အင့်….အာ့..ရှီး…အာ့ရှီးး” “အာ့…..ကိုအေး သစ္စာပြီးတော့မယ့်ဆောင့်ပေးပါ” “ဗျစ်….ဗျစ်…ဗျစ်..ဗျစ်…….ဘွတ်..ဖန်းးဖန်းး” “အာ့..ပြီးပြီ…..ကိုအေးးးးးအားးးး” ကိုအေးလည်း ပြီးချင်လာလို့ အားနှစ်ပစ်ဆောင့်လိုက်ပြီး သူတ်ကိုပန်းထုတ်လိုက်တယ်။ “အားးးးးးးးကိုအေးလည်း ပြီးပြီသစ္စာ” သစ္စာရောကိုအေးရော အိပ်ရာပေါ်ကို မှောက်ကျသွားကြတယ်။ ဒါပေမယ့်.. လီးကတော့ ကျွတ်မထွက်ပဲကျန်နေတယ်။
“ကိုအေးဆင်းလေကွာ လေးတယ်” “စိမ်ထားချင်တာ” “လူဆိုး.ကိုအေးးး” “ဟင်းးးးဟင်းးးးးးး” “သစ္စာကိုချစ်လား ကိုအေး” “ချစ်တယ်သစ္စာ” “အမြဲပဲပြောပေးနှော် ကိုအေး” “ပြောပေးမှာပေါ့ကွာ၊ သစ္စာရော ကိုအေးကိုချစ်လား” “ချစ်တယ် ကိုအေး” “ကိုအေး..သစ္စာလေ ကိုအေးကို အားနာတယ်သိလား” “ဘာလို့” “ကိုအေးကို အပျိုစင်ဘဝကိုမပေးနိုင်လို့လေ” “အာ..သစ္စာရယ် တကယ်ချစ်ရင် အဲဒါက အရေးမကြီးဘူးလေ၊ တယောက်နှင့်တယောက် နားလည်ဖို့ပဲလိုတာ၊ ပြီးတော့ အမှေးပါးလေးတစ်ခုကိုပဲ တန်ဘိုးထားကိုးကွယ်တဲ့လူမျိုးထဲမှာ ကိုအေးမပါဘူးလေ၊” “ကျေးဇူးပါပဲ ကိုအေးရယ်” “ရပါတယ်.သစ္စာရယ်၊ ကိုအေးလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်” “ဟင်ဘာလို့” “သစ္စာက အတွေ့အကြုံရှိပြီးသားပဲ အိမ်ထောင်တစ်ခုကို ဘယ်လိုတည်ဆောက်ရမယ်ဆိုတာ သိပြီးသားပဲလေ၊ ကိုအေးကိုချစ်ရင် ကိုအေးအသိုင်းအဝိုင်းပါ နားလည်ပေးပါ၊ သည်းခံပေးပါကွယ်” “သစ္စာနားလည်ပါတယ် ကိုအေး သစ္စာကြိုးစားပါ့မယ်” “အဲဒါတွေကြောင့်လည်း ကျေးဇူးတင်သလို ကိုအေးအလိုကျ လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်လည်း ကျေးဇူးတင်တယ်” “ကိုအေးလိုတာသာပြောပါ သစ္စာလုပ်ပေးပါ့မယ်” အိမ်ထောင်ကျသည်မှစ၍ သစ္စာ ကိုအေးအလိုကို လိုက်သလို ကိုအေးမိဘနှင့်မောင်နှမများကိုလည်း နားလည်သည်းခံပေါင်းသင်းတဲ့အတွက် သစ္စာကို ကိုအေးတို့တအိမ်လုံးကလည်း ချစ်ကြတယ်၊၊ အခုဆိုရင် ကိုအေးနှင့်သစ္စာမှာ သားတစ်ယောက် သမီးတစ်ယောက်မွေးဖွားပြီး သားအကြီးဟာ ဆယ်တန်းကိုဖြေဆိုပြီးလေပြီ၊ သမီးငယ်လည်း ခြောက်တန်းအထိ ရောက်နေပြီလေ၊ ဒါပေမယ့် အခုထိရန်ဖြစ်စကားများတာမရှိပဲ ချစ်မြဲချစ်လျက်ရှိနေဆဲပါ………ပြီးပါပြီ။
လိမ္မာ စမ်း ပါ ချာတိတ်ရယ်